Marxaladda loo dejiyay Style Saudi! 1000+ Maanka Khubarada si ay ugu dhaqaaqaan Isbeddellada cusub ee Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Marxaladda loo dejiyay Style Saudi! 1000+ Maanka Khubarada si ay ugu dhaqaaqaan Isbeddellada cusub ee Dalxiiska Adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maalgashiga Aadanaha, ficilka iyo natiijooyinka ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu Wasiirka Dalxiiska Sacuudi Carabiya u dejiyay adduunka. Sacuudi Carabiya ayaa ku casuuntay 1000+ hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee ugu dhalaalka badan uguna saameynta badan Maalgelinta Mustaqbalka ee KAICC ee Riyadh, Oktoobar 26-28.
Mustaqbalka Hindisaha Maalgashiga wuxuu ku salaysan yahay Riyaad oo xafiisyo ku leh meelo kale oo adduunka ah.
26-28 Oktoobar, 2021 waa munaasabadda sannad-guurada 5-aad oo cinwaankeedu yahay "Maalgashiga Aadanaha" Goobtu waa Hoteelka Ritz-Carlton iyo King Abdulaziz International Conference Cente (KAICC) oo ku yaal Riyaad ee Sacuudi Carabiya
Wasaaradda Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya ayaa ku casuuntay 1000+ hoggaamiyeyaasha dalxiiska, oo ay ku jiraan wasiirrada dalxiiska ee ka kala yimid daafaha dunida, si ay u dejiyaan marxaladda dib -u -soo -kabashada dalxiiska, maalgashiga iyo wax -qabadka.
Sacuudi Carabiya wax walba waa baxayaan, oo sida marar badan la muujiyey intii lagu jiray xiisadda COVID-19, Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Mudane Ahmed Al-Khateeb wuxuu hadda ku daray wadahadalka waqti dalxiis. Wuxuu ku casuumay 1000+ hoggaamiyeyaasha dalxiiska oo ka socda qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay inay ka qaybgalaan dhacdada FII ee Riyadh.
Heerarka oo dhan, FII wuxuu ka soo jeestay "Maal-galinta Aadanaha" oo wuxuu u beddelay qaab-hawleed ka buuxa soo-kabashada safarka iyo dalxiiska adduunka.
Bishii Maajo 26, 2021, isla Wasiirka Dalxiiska ee Sucuudiga ayaa dhiibay aragtidiisa ku aaddan dalxiiska adduunka, markii uu martigeliyay Shirkii Soo -kabashada Dalxiiska ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO)
6 bilood ka dib waxay u muuqataa Zurab Pololikashvili, Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu FII ugu arkaa Riyadh tartan ahaan wuxuuna ugu baaqay Shirweynaha Dalxiiska Adduunka ee UNWTO ee Barcelona inuu si toos ah uga hor imanayo taariikhaha uu FII ku dhigay Riyadh.
The xeelad la mid ah ayaa la adeegsaday markii UNWTO ay qabanqaabisay kulan muhiim ah isla mar WTTC waxay bishii May ku yeelatay shirkeedii caalamiga ahaa Cancun, Mexico.
UNWTO waxay u dhaqmaysaa si carruurnimo
eTurboNews la weydiiyay bishii Abriil haddii tan loo qabtay in WTTC Summit -ka uu fashilmo? UNWTO ma qorshaynaysaa inay la tartanto hindisaha Sucuudiga? Qoraal dhulka hoostiisa ku qoran ayaa oran doona: UNWTO waxay u dhaqmaysaa si carruurnimo.
Ergay iyo wasiir UNWTO oo lagu casuumay Barcelona ayaa hore u sheegay eTurboNews isaga ama iyada ayaa u safri lahaa Sacuudi Carabiya.
Waa maxay Hindisaha Maalgashiga Mustaqbalka (FII)?
Hindisaha Maalgashiga Mustaqbalka (FII) waa madal caalami ah oo loogu talogalay dood ay khubaradu hoggaaminayaan oo u dhexaysa hoggaamiyeyaasha caalamka, maalgashadayaasha, iyo hal-abuurayaasha leh awoodda qaabaynta mustaqbalka maalgashiga adduunka. Waxa diiradda la saarayaa adeegsiga maalgashiga si loo wado fursadaha kobcinta, awood -u -helidda hal -abuurka iyo teknolojiyadda carqaladeeya, iyo wax ka qabashada caqabadaha adduunka.
Machadka FII wuxuu diiradda saarayaa shan meelood:
Iyagoo dadaallada iyo kheyraadka u jihaynaya dhinacyadan, FII waxay rumaysan tahay inay ku abuuri karaan saamayn togan bini -aadamka.
FIKIR, XCHANGE, ACT
Machadka FII wuxuu ku dhisan yahay saddex tiir - FIKIR, XCHANGE, ACT - kaas oo aan uga sii wadno ujeeddooyinkayaga aasaaska ESG ee xooggan. Tiirka THINK wuxuu awood u siiyaa maskaxda dunida ugu ifka badan si ay u aqoonsadaan waddooyinka ugu wanaagsan ee mustaqbal ifaya leh.
Tiirka XCHANGE wuxuu abuuraa aagag ay khubarada, hal -abuurayaasha, hoggaamiyeyaasha, iyo maalgashadayaashu isugu yimaadaan si ay u wadaagaan aqoonta ayna iska kaashadaan xagga isbeddelka. Ugu dambayntii, tiirka ACT wuxuu raadiyaa oo maalgeliyaa farsamooyin cusub oo ballan qaadaya xalalka dhabta ah ee adduunka khuseeya.
Kala -duwanaansho kale oo ka jira Machadka FII ayaa ah ku -adkeysiga mabaadi'da ESG ee loo dhan yahay oo ah waddada loo maro waaritaanka adduunka iyo mustaqbal ifaya. Waxaan hiigsaneynaa inaan kor u qaadno wacyiga ku saabsan oo aan wanaajinno hirgelinta heerarka ESG waxaanan ballan qaadaynaa inaan si masuuliyad leh u maareynno waxqabadyadeena deegaanka, bulshada, iyo maamulka si aan ugu hoggaansanno mabaadi'daas.
Kala -duwaha muhiimka ah ee Machadka FII oo leh dadaallo kale oo la mid ah oo ficil ahaan jira. FII waxay qaadataa dadaallo cilmi-baaris lagu wado oo ka baxsan baaxadda caadiga ah iyadoo qaadaysa tallaabo iyada oo loo marayo maalgelinta mustaqbalka soo socda, xalalka dhabta ah.
FII waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay mid cod dheer ugu baaqaya bulshada caalamka inay tallaabo qaadaan, abuuraan aalado ay fikrado ka dhashaan, ka dibna sugaan maalgashiga si ay u noqdaan kuwo dhab ah.
Marka la soo koobo, himilada Machadka FII waa in la hagaajiyo oo la suurtogeliyo fikradaha lagu xallinayo caqabadaha ugu degdegga badan adduunka iyada oo la adeegsanayo farsamooyin horumarsan oo waara.
Dhacdada Maalgelinta ee soo socota ee soo socota mar walba waxay lahayd laba kalfadhi oo dalxiis oo gaar ah oo ku taxan:
Boostada mustaqbalka, oo lagu maalgeliyo dalxiiska waara.
Socdaalka ganacsiga iyo waqtiga firaaqada ee duni waarta.
Ku -daridda 1000+ hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee doodda FII, warshadaha socdaalku waxay leeyihiin shabakad iyo fursad qolka dambe ee hoggaamiyeyaasha si ay isugu yimaadaan sida dhacdo kale oo kale tan iyo markii masiibada dillaacday.
Guddiga Wakiillada ee FII:
Mudane Yaasir Al-Rumayyan
Guddoomiyaha PIF, Guddoomiyaha Saudi Aramco Saudi Arabia
Safiirka KSA ee USA Saudi Arabia
Mudane Senator Matteo Renzi
Senator -ka Talyaaniga ee Florence iyo Raiisul Wasaarihii hore ee Talyaaniga
Mudane Mohamed Al Abbar
Aasaasaha & Maareeyaha EMAAR guryaha Imaaraadka Carabta
Aasaasaha X-Prize Foundation & Singularity University USA
Guddoomiyaha Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda ee King Abdullah (KAUST)
Professor Pharmaceutical Chemistry, Jaamacadda California (UCSD) Sacuudi Carabiya